Xubno ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil oo Sheegay in Eegga ay ka Go,ayaan Kooxda. – Rasaasa News
Jun 30, 2010 ayaan Kooxda., Xubno ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil oo Sheegay in Eegga ay ka Go
Warar hoose oo naga soo gaadhay Waqooyiga Maraykanka ayaa sheegaya in xubno tiro ah, oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Jwxo-shiil, in ay eegga ka soo go,een kooxdaas, diyaarna ay u yihiin in ay qaataan nabada ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya doonayaan.
Wararku waxay sheegayaan in xubnaha ka go,ay Jwxo-shiil ee jecel in ay ka qayb galaan nabada ay tiradoodu gaadhayso afar xubnood oo ka tirsan golaha dhexe ee kooxda. Xubnahan oo ka gaabsaday in magacyadooda la soo bandhiga ayey saddex ka mid ah ku nool yihiin waqooyiga Maraykanka, meesha hal xubin uu degan yahay Yurub.
Xubanahani ma ayna sheegin in ay ku biirayaan ururka ONLF ee uu hogaamiyo Eng. Salaxudin oo isagu dhawaan la galay dawlada Itobiya wadahadal nabadeed iyo in ay iskood isu taagi doonaan.
Warar hoose ayaa sheegaya in culays badan uu saaran yahay Jwxo-shiil, oo kaga imanaya xubnaha kooxdiisa. Waxayna ku cadaadinayaan Jwxo-shiil, in uu is casilo madaama ay dawlada Itobiya soo diiday dhawr cosi oo uu qadintay. Waxaana lagu xidhay kooxda hal shardi oo ah in ay badalaan Jananka la helana sifo uu wadahal ku dhex mari karo Itobiya iyo kooxda.
Kooxda ayaa waxaa u muuqda in fara madhnaan ay kaga imanayso taageerayaasheeda, ka dib kolkii ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya muujiyeen rabitaan la,aanta ay kooxda u hayaan iyo sida ay u jecel yihiin nabad ka dhalata dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaynu isha ku hayndoonaa waxa ka soo kordha xubnaha iyo talaabada xigta ee ay qaadi doonaan.